अन्तर्वार्ता पटक पढिएको
गणेश भेटवाल // हेटौंडामा भदौको ६ र ७ गते नेपाल जेसीजको क्षेत्र ‘ख’ सम्मेलन हुँदैछ ।
नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्ने लक्ष्यका साथ हुने सम्मेलनमा ३२ वटा शाखाका करिब ८ सय युवाहरुको सहभागिता रहनेछ । बस्तीपुर जेसीजको आतिथ्यतामा हेटौंडाको पूजा पार्टी प्यालेसमा सम्मेलन हुन लागेको हो । हेटौंडामा हुने सम्मेलनको तयारीको लागि विभिन्न उपसमिति निर्माण गरी काम भइरहेको छ । सन् २०११ मा स्थापित बस्तीपुर जेसीजले पहिलो पटक क्षेत्र सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनले नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने तथा युवाहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास हुने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलनले मकवानपुरलाई चिनाउन सफल हुने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलनबाट मकवानपुर घोषणापत्र जारी हुनेछ । सम्मेलनको तयारीको विषयमा रहेर साझाकुराकर्मी श्रीजना नेपालले सम्मेलन निर्देशक गणेश भेटवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
१. बस्तीपुर जेसीजको आतिथ्यतामा नेपाल जेसीजको क्षेत्र ‘ख’ को सम्मेलन आगामी भदौ ६ र ७ गते हेटौंडामा हुँदैछ । त्यसको तयारी कहाँसम्म पुग्यो ?
तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत सम्मेलनको तयारी सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेर हेटौंडाको आतिथ्यता असाध्यै राम्रो छ भन्ने सन्देश दिने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेका छौं । र, हामीलाई विश्वास छ हामी सम्मेलन सफल पार्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । हालसम्म शाखाका पदाधिकारी तथा अतिथिहरुलाई स्वागत एवम् सम्मान गर्न हामी तयारी अवस्थामा रहेका छौं ।
२. यहाँहरुले ३२ वटा शाखाको उपस्थिति रहने भन्नु भएको छ । ती शाखा कहाँ कहाँका हुन् र कति जनाको सहभागिता रहन्छ ?
नेपाल जेसीजको क्षेत्र ‘ख’ अन्तर्गत् बागमतीदेखि म्याग्दीसम्म पर्दछ । यिनै जिल्लाहरुको करिब ६ सय युवाहरुको सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ । त्यसको अलावा अन्य अतिथिहरुसमेत गरी करिब आठसय जना युवाको उपस्थिति रहनेछ ।
३. सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य के हो ?
जेसीज भन्नेबित्तिकै नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास र भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्नुको साथै व्यवसाय प्रवद्र्वन गर्नु पनि हो । सामाजिक विकासमा केहि नेतृत्व गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । अहिले हेटौंडा प्रदेश नम्बर ३ को राजधानीसमेत हो । हामीले हाम्रो नेतृत्व र व्यक्तिको विकास गर्नुका साथै हाम्रो क्षेत्रको विकासमा समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो हेटौंडाको प्रचार देशव्यापीरुपमा फैलाउन र सामाजिक अभियानलाई थप बलियो बनाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं ।
४. तपाईहरुले सम्मेलनले स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्वनको साथै स्थानीय उत्पादनमा पनि प्रवद्र्वन हुन्छ भन्नु भएको छ । केही योजना नै बनाउनु भएको छ कि ?
मकवानपुर जिल्ला आफैंमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण जिल्ला हो । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने सबैलाई हामीले साइड सिनमा लैजाने व्यवस्थासमेत मिलाएका छौं । जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र अवलोकन गराउन हेटौंडा एकेडेमीले दुईवटा बससमेत सहयोग गरेको छ । हामीले सम्मेलनको समयमा जिल्लाको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा जान इच्छा व्यक्त गर्नेहरुलाई सोहीअनुसार सहजीकरण समेत गर्नेछौं । हामीले मकवानपुरको चिनारीको रुपमा रहेको ठेकीलाई समेत मायाको चिनोका रुपमा प्रयोग गर्दैछौं । स्थानीय महिला दिदीबहिनीहरुले उत्पादन गरेका अचार तथा विभिन्न हस्तकलाका सामग्रीहरुलाई निःशुल्करुपमा सम्मेलनमा स्टल राख्न दिने निर्णय गरेका छौं । अहिलेसम्म केहिले स्टल बुकिङ गरिसक्नु भएको छ भने केहिले गर्ने क्रम जारी छ ।
५. सम्मेलन आयोजना गर्न कति खर्च हुने अनुमान गर्नु भएको छ ? त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउनु हुन्छ ?
सम्मेलन गर्न करिब ५० लाख खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौं । त्यो रकम हामीले सम्मेलनमा उपस्थित सबैसँग प्रतिव्यक्ति तीनहजार ६ सय रजिष्ट्रेसन रकम लिन्छांै । त्यहिँबाट करिब ३० लाख उठ्छ । नेपाल जेसीजले पनि हामीलाई एक लाख सहयोग गर्छ भने बाँकी रकम हामी यहिँका सदस्यहरु तथा व्यवसायीहरुबाट उहाँहरुको व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्वन हुनेगरी सहयोग रकम लिन्छौं ।
६. देशभरबाट आउने जेसीजकर्मीहरुका लागि व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?
सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि हामीले विभिन्न उपसमितिहरु निर्माण गरेका छौँ । अतिथि सत्कार, मञ्च व्यवस्थापन, खाना व्यवस्थापन, होटल व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका उपसमितिहरु छन् । जसले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ । जसले गर्दा हरेक काममा सहज भएको छ । यसकारण सम्मेलनमा आउने जेसीजकर्मीहरुका लागि हामीले सकेसम्म सहज होस् भन्ने उद्देश्य राखेका छौँ । जसमा सम्मेलनमा आउने जेसीज साथीहरुलाई सहज होस् भन्नका लागि हामीले अग्रिम रजिष्ट्रेसन गराइरहेका छौँ । सबै सहभागीका लागि एसीसहितको सुविधासम्पन्न होटलको व्यवस्था गरेका छौँ ।
७. यस सम्मेलनले तपाईहरुको शाखालाई के फाइदा पुग्छ ?
कुनै पनि शाखाले सम्मेलन गर्ने मौका पाउनु अवसर र चुनौती दुबै हो । एरिया ‘बी’का ३२ वटा शाखाहरुको जमघट हुन्छ । साथै अन्य क्षेत्रबाट समेत जेसीजकर्मीहरुको सहभागिता हुनेछ । एक–अर्का शाखाहरुसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुन्छ । त्यसमा आफ्नो शाखाले गरेका राम्रा कुराहरुलाई प्रस्तुत गर्ने अवसरसमेत मिल्छ । यसका साथै सम्मेलनमा शाखाका लागि केही आर्थिक स्रोतसमेत आम्दानी हुनेछ ।
८. यो सम्मेलनले हैटौंडाको बस्तीपुरबाट दिने सन्देश के हो ?
पहिलो कुरा त मकवानपुर जिल्ला औद्योगिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो । यस जिल्लामा जेसीज युवाहरुको सम्मेलन हुनु भनेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो टेवा पुग्नु हो । देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउने जेसीज अभियान्ताहरुलाई यहाँको पर्यटकीय तथा औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा अवगत हुनेछ । साथै हामीले यहाँका केही महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका बारेमा स्थलगत अवलोकन गराउने लक्ष्यसमेत लिएका छौँ । जसले गर्दा यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुग्नेछ । जसले अझ यहाँको पहिचानलाई देशभरसम्म पु¥याउन मद्दत गर्नेछ । नेपाल जेसीजले विश्वास गरेर बस्तीपुर जेसीजलाई दिएको जिम्मेवारीलाई सहजरुपमा सम्पन्न गर्दै आगामी दिनका लागि समेत बस्तीपुर जेसीजले जुनसुकै राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनेछौँ ।
2584299	Times Visited.